Aluminium jaban aluminium daawaha ah iyo qaybo ka baaraandegidda daaqadda warshad iyo alaableyda | Ouzhan
Horumarinta aluminiumka aluminium ee aluminiumka iyo dariishadaha Aluminiumka aluminium ee albaabbada iyo daaqadaha, dhismaha wershadaha derbiga daahyada waa warshad aad ugu cusub dalkeenna, laga soo bilaabo xoq, yar ilaa weyn, waxay ku gaadhay horumar degdeg ah boodbood iyo soohdin.
Aluminium aluminium albaabka iyo daaqada daaqada
Tobannaan sano gudahood, warshaduhu waxay adeegsadeen tikniyoolajiyad casri ah si ay kor ugu qaadaan hagaajinta qaab-dhismeedka warshadaha, u cusbooneysiinta wax soo saarka, hagaajinta qaabdhismeedka, qabashada cilmiga sayniska iyo teknolojiyadda, waxayna yareeysay farqiga u dhexeeya heerka sare ee caalamiga ah. albaabka aluminium ee dalkayga iyo daaqadda dhismaha daaqadda warshadaha derbiga ayaa soo maray horumar ammaan leh. Aluminiumka aluminium ee aluminiumka iyo daaqadaha ayaa ah wax soo saarka horumarinta qalabka dhismaha cusub oo casri ah. Waxaa lagu horumariyey waddammada horumaray sida Jarmalka, Mareykanka, iyo Boqortooyada Ingiriiska bilowgii sannadihii 1930-naadkii. Sababtoo ah aaladaha aluminium ee aluminiumku waa khafiif maaddo ah, waxay ka badin karaan astaamo leh qaabab iskudhaf adag, gaar ahaan aluminium Muuqaalka quruxda badan ee albaabada daaqadaha iyo daaqadaha iyo dhismahooda dhismaha ee aadka u wanaagsan ayaa ka dhigtay inay caddeeyaan naqshadayaasha.
Cadaadiska daxalka aluminium ee aluminium: Cufnaanta aluminiumku waa kaliya 2.7g / cm3, taas oo ku saabsan 1/3 cufnaanta birta, naxaasta ama naxaasta (7.83g / cm3, 8.93g / cm3, siday u kala horreeyaan). Xaaladaha badankood ee deegaanka, oo ay ku jiraan hawada, biyaha (ama biyaha cusbada), kiimikada kiimikada iyo nidaamyo badan oo kiimiko ah, aluminium ayaa muujin kara iska caabbinta daxalka.
Waxqabadka aluminium ee aluminium: Nooc Aluminium ah ayaa badanaa la doortaa sababtoo ah ku xirnaanta wanaagsan. Iyada oo ku saleysan miisaanka loo siman yahay, tabinta aluminium waxay ku dhowdahay 1/2 naxaas ah.
Kuleylka kuleylka: Kuleylka kuleylka ee aluminium aluminiumku wuxuu ku saabsan yahay 50-60% naxaas ah, taas oo faa'iido u leh soo saarista kuleylka kuleylka, uumi-baxayaasha, qalabka kululaynta, maacuunta wax lagu kariyo, iyo madaxyada silsiladda gawaarida iyo hiitarka.
Non-ferromagnetic: Noocyada aluminiumku waa kuwo aan bir-birta-birta-birta ah, taas oo ah muuqaalka muhiimka u ah warshadaha korantada iyo korantada. Noocyada Aluminium si iskood ah uma guban karo, taas oo muhiim u ah codsiyada ku lug leh qabashada ama taabashada waxyaabaha guban kara iyo walxaha qarxa.
Shaqeynta: Shaqeynta qaababka aluminiumku waa heer sare. Noocyo kala duwan oo aluminium ah oo liidata iyo aluminium aluminium ah oo la tuuray, iyo sidoo kale gobollada kala duwan ee alwaaxyadan ay leeyihiin ka dib markii la soo saaray, astaamaha farsamaynta ayaa si aad ah u kala duwan, taas oo u baahan qalab mashiinno gaar ah ama farsamo.
Qaab-dhismeedka: Awoodda jiidaha ee gaarka ah, xoogga dhalidda, ductility iyo heerka qallafsanaanta shaqada ayaa haysa isbeddelka ku yimaada isbeddellada la oggol yahay.
Dib-u-warshadaynta: Aluminium si aad ah ayaa dib loo cusboonaysiin karaa, astaamaha aluminiumka dib loo warshadeeyayna waa kuwo aan laga sooci karin aluminiumka aasaasiga ah.
Aluminium loo habeeyey aluminium daaha iyo qaybo ka mid ah daaqadaha
Waxyaabaha Daawaha Aluminium (ikhtiyaari ikhtiyaari ah)
Isticmaalka Sarriflayaasha, uumi-baxayaasha, qalabka kululaynta, maacuunta wax lagu kariyo, iyo madaxyada silsiladda gawaarida iyo hiitarka, iwm.
Hore: Qalabka aluminium ee aluminium elektaroonigga ah
Xiga: Mashiinka Mashiinka CNC Qaybaha Birta ahama